China PSA oxygen concentrator / Psa Nitrogen Plant maka ere Psa Nitrogen Generator na-emepụta na ndị na - eweta ya. | Ma ọ bụ
PSA oxygen concentrator / Psa Nitrogen Plant maka ire ere Psa Nitrogen Generator
Oxygen bụ ikuku dị oke mkpa maka ịkwado ndụ n'ụwa, pụrụ iche n'ụlọ ọgwụ, ikuku oxygen na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji zọpụta ndị ọrịa.
ETR PSA Medical Oxygen Plant nwere ike ịmepụta ikuku ahụike oxygen site na ikuku ozugbo. ETR Medical Oxygen Plant nwere Atlas Copco ikuku compressor, SMC draya na nzacha, PSA oxygen osisi, echekwa tankị, cylinder manifold system. HMI na-achịkwa ụlọ ọrụ na APP usoro nlekota oru maka ntanetị na ntanetị.
Abịakọtara ikuku na-eme ka ọ dị ọcha site na ikuku ikuku na nzacha ruo ọkwa ụfọdụ maka isi generator iji rụọ ọrụ. Ejikọtara ikuku na-echekwa ikuku maka ezigbo ikuku nke ikuku na-eme ka ọ belata mgbatị nke ikuku ikuku. Igwe na-ewepụta ihe ikuku oxygen na teknụzụ PSA (nrụgide swing adsorption), nke bụ oge egosipụtara usoro ikuku oxygen. A na-enyefe ikuku oxygen dị ọcha na 93% ± 3% na tankị na-echekwa oxygen maka ezigbo ngwaahịa nke ngwaahịa. Oxygen na nchekwa nchekwa na-echekwa na nrụgide 4bar. N'iji ikuku oxygen, oxygen ọgwụ nwere ike jupụta na cylinders na nrụgide 150bar.
A na-emepụta PSA oxygen generator site na iji teknụzụ Nrụgide Mgbasa Ọganihu. Dị ka amaara ama, ikuku oxygen gbara gburugburu 20-21% nke ikuku ikuku. Igwe oku oxygen PSA jiri sieves nke Zeolite kewaa oxygen na ikuku. A na-ewepụta oxygen na ịdị ọcha dị elu ebe nitrogen nke ndị na-eme ihe na-adọrọ adọrọ na-eduga n'ime ikuku site na ọkpọkọ ikpochapu.
Nrụgide siwing adsorption (PSA) bụ nke mejupụtara arịa abụọ juputara na sel molekụl ma rụọ ọrụ alumina. A na-ebugharị ikuku na-esote otu arịa na 30 degrees C na oxygen na-eme dị ka ngwaahịa ngwaahịa. A na-ewepụta nitrogen dị ka gas na-ekpochapu ikuku. Mgbe a na-ejupụta akwa akwa mkpụrụ ndụ, a na-agbanwe usoro ahụ gaa na akwa ọzọ site na valvụ akpaka maka ọgbọ oxygen. A na-eme ya mgbe ikwe ka akwa ahụ jupụtara na ya ịmaliteghachi site na ịda mbà n'obi na ịchacha nrụgide nke ikuku. Vesselsgbọ mmiri abụọ na-arụ ọrụ ọzọ na mmepụta oxygen na mmụgharị na-ekwe ka ikuku oxygen dị na usoro ahụ.
Ngwa nke osisi PSA
A na-eji osisi oxygen oxygen anyị PSA n'ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere:
Akwụkwọ akwụkwọ na pulp ụlọ ọrụ maka nchapu na ntinye akwụkwọ Oxy
Industrieslọ ọrụ maka iko maka ịkwanye ọkụ
Alllọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ igwe maka ikuku oxygen nke ọkụ
Chemical oru maka ọxịdashọn Jeremaya mere na incinerators
Mmiri na Mmiri mmiri
Weldgbado ọkụ gas, ịcha na brazing
Industrylọ ọrụ iko
Nke gara aga: Industrial High centta Psa Oxygen Generator PSA Oxygen Plant
Osote: Industrial n'ọtụtụ PSA Oxygen Concentrator Oxygen mmepụta Osisi na asambodo